ပီတိ: July 2008
လမ်းပြပြီး လိုရာရောက်အောင် ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
အတိတ်ရဲ့ ညအမှောင်မှာ တကိုယ်ထီးထီး
ညင်သာငြိမ့်ညောင်း လေဟုန်စီးခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်။
ဘ၀မှာလည်း ဖြစ်နိုင်စရာ မရှိတော့ဘူး…
Posted by P.Ti at Thursday, July 31, 20084comments Links to this post
ဘောင်းဘီဝတ်ရတာ ဘာကြောင့် ရှက်တဲ့ အကြောင်း ကတော့ ဒီလိုပါ…
မစန္ဒာတို့ မသီတာတို့ နဲ့အိမ်မှာ မကလျာ ကလည်း အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့။ မသီတာ နဲ့ မကလျာ တို့ကတော့ အပြင်ထွက်တိုင်း ဘောင်းဘီရှည်ကိုပဲ ၀တ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘောင်းဘီရှည်က သူတို့အတွက် လုံခြုံတယ်မှုရှိတယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခြေထောက်အလှနဲ့လည်း သင့်တော်တယ်လေ။
တနေ့မှာတော့ စကားစပ်ပြီးရင်း မစန္ဒာက
“အမတို့က ဘာလို့ အပြင်သွားရင် ဘောင်းဘီတွေဝတ်တာလဲ…”
“အော် ညီမလေးရယ်… အမတို့က စကပ်ဝတ်လေ့မရှိတော့ ဘောင်းဘီပဲ ၀တ်တာပေါ့…” မကလျာကပြန်ပြီးတော့ ပြောပါတယ်။
“ဟင် အမကလည်း ဘောင်းဘီဝတ်ရတာ ရှက်စရာကြီးပါ…”
“အမတို့ဝတ်တာက ဘောင်းဘီရှည်တွေပါကွယ်၊ ဘာမှ ရှက်စရာမရှိပါဘူး။ တရုတ်မလေးတွေလို ဘောင်းဘီ တိုတိုလေးတွေဝတ်တာမှ မဟုတ်တာ…”
“အမတို့ကလည်း သမီးဆို ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ရမှာ ရှက်လို့ စကပ်ပဲဝတ်တယ်…”
“စန္ဒာက ဘာလို့ ဘောင်းဘီရှည်တောင် ၀တ်ရမှာ ရှက်တာလဲ…”
“ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ရင် သမီးရဲ့ ပေါင်ကို အလုံးလိုက်ကြီး သူများတွေမြင်သွားမှာ ရှက်စရာကြီး…”
နောက်ပိုင်းမှာတော့ မသီတာနဲ့တွေ့ရင် - အမရေ ပေါင်အလုံးလိုက်ကြီး သူများတွေမြင်မှာ ရှက်ဘူးလားလို့ - နောက်လေ့ရှိပါတယ်…
Posted by P.Ti at Wednesday, July 30, 2008 8 comments Links to this post
Posted by P.Ti at Monday, July 28, 20085comments Links to this post
Posted by P.Ti at Friday, July 25, 2008 1 comments
မတွေ့တာကြာလို့ မျက်နှာလေးကို တွေ့ချင်လိုက်တာ…
မကြားတာကြာလို့ စကားလေးတွေ ကြားချင်လိုက်တာ…
ရင်ခုန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်ရနံ့သင်းသင်းလေး လွမ်းလိုက်တာ…
စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေကို သတိရလိုက်တာ …
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပြောလိုက်သည် ငါမင်းကိုချစ်မိနေပြီ။
ချိုသလား ခါးသလား မှန်သလား မှားသလား
တွေ့ချင်လိုက်တာက နင် ငါမဟုတ်…
ကြားချင်လိုက်တာက နင် ငါကမပြောချင်…
လွမ်းလိုက်တာလာမပြောနဲ့ ငါက သတိတောင်မရ…
အဲဒါ ဘဘုန်းကြီးက ဟောတဲ့တရားတဲ့….
Posted by P.Ti at Monday, July 21, 20086comments Links to this post
ခေတ် စနစ် နှစ် ပြောင်းလဲခဲ့
ရိုးသားနိုးကြား သူတို့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိနေဆဲ…
စိမ်းရွှေရွှေအ၀ါသန်းတဲ့ ကြယ်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ်မြေခ ကြွေကြ နေပေမယ့်
ရဲရဲတောက် အဖြူရောင်ကြယ်ပွင့်တွေကတော့ တောက်ပနေဆဲ…
Posted by P.Ti at Saturday, July 19, 20080comments Links to this post
Posted by P.Ti at Friday, July 18, 20085comments Links to this post
ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ၀င်စတန် ချာချီက သူနေခဲ့တဲ့ မူလတန်းကျောင်းကို မိန့်ခွန်းပြောဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ကျောင်းသားကလေးတွေကို ပြောပါတယ် “ဒီနေ့ဟာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်မယ့်နေ့ပဲ။ ၀င်စတန် ချာချီဟာ အင်္ဂလိပ်လို စကားပြောတာ အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက် ဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော လိုက်တာရေးထား။ မမေ့နိုင်တဲ့ မိန့်ခွန်းပြောမှာ အသေအချာပဲ။”
ချာချီ ရောက်လာပါပြီ။ ပြီးတော့ မိန့်ခွန်းပြောဖို့ထလာပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို မျက်မှန်အပေါ်ကနေ ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားများကတော့ မိန့်ခွန်းကိုကြားပြီးတော့ စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်အုပ်ဆရာကြီးကတော့ မိန့်ခွန်းဟာ ချာချီရဲ့ အကောင်းဆုံး မိန့်ခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။
ချာချီရဲ့ အရည်အချင်းထဲမှာ ဇွဲ ရှိခြင်းပါပဲ။ သူဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးတတ်ပေ၊ အဲဒီ စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ အင်္ဂလိပ်တွေ ကို စိတ်အားမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေကို သူများတွေ လက်နက်ချနိုင်လောက်မယ်အခြေအနေတွေမှာ ဆက်ပြီး စစ်တိုက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ တစိုက်မတ်မတ် စူးစူးနစ်နစ်လုပ်ပြီး၊ ပြောတာနဲ့ လုပ်တာကို တထပ်တည်းကျအောင်လုပ်တာကို ဇွဲရှိတယ်လို့ ဆိုလို့တာပါ။
ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ ဂျစ်တူး ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ကျွန်တော့် မွေးနေ့တုန်းက လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထဲက စာသားလေးတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဆုတောင်းတာမဖြစ်ရင် နောက်ဆုံးဆုတောင်းဖြစ်အောင်လို့ပါ။ :)
GyitTu, Never Give Up!
Posted by P.Ti at Tuesday, July 15, 20082comments Links to this post
Posted by P.Ti at Sunday, July 13, 20084comments Links to this post
Posted by P.Ti at Friday, July 11, 20083comments Links to this post
တခါတလေ မမှန်သောစကားတွေကို ကြိုက်နေတတ်တယ်
လူတွေက ကိုယ့်ဟာကို မသိအောင်ယူတာ မုန်းတယ်တဲ့
ခိုးမိတာ ကိုယ် မဖြစ်သေးခင်ပေါ့
လူတွေက ကိုယ်ဟာ အားလုံးနဲ့ မတူဘူးလို့ထင်တတ်တယ်
တကယ်တော့ လူအများလုပ်တာပဲ လုပ်တာပါပဲ
လူတွေက အကောင်းဆုံးကို အမြဲလိုချင်တယ်တဲ့
လူတွေက အားလုံးကို ပျော်ရွှင်ချင်တယ်တဲ့
တကယ်တော့ လူညီလျှင် ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်တာပါပဲ
ကိုယ်တိုင်လည်း လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ပါပဲလေ။
Posted by P.Ti at Thursday, July 10, 20084comments Links to this post